I-Fusion 10 kunye ne-Fusion 10 Pro ngoku ziyafumaneka kwi-MacOS High Sierra | Ndisuka mac
I-Fusion 10 kunye ne-Fusion 10 Pro ngoku ziyafumaneka kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
Uninzi lwabasebenzisi beMacOS basebenzisa inkqubo yenkqubo yokwenziwa kwezinto, ngokubanzi ukufaka iiwindows kwiimfuno zobuqu okanye zobungcali. Ngokumka kweMacOS ePhakamileyo yeSierra, ezona zicelo ziphambili zokwenza ubunyani ziqale ngeenguqulelo zabo zenkqubo entsha yeApple. Kwindaba ye Izinto ezifanayo, Sinenguqulo ehambelana nenkqubo entsha ye-Apple yokusebenza iiveki. Endaweni yokuba amakhwenkwe VMware, Baye bakhetha ukupolisha isoftware yabo ngakumbi ngeendaba zokugqibela zomxholo weSierra ePhakamileyo. Ukusukela namhlanje sinenguqulo ye Fusion 10 kunye Fusion 10 Pro, iyahambelana MacOS ePhakamileyo yeSierra.
Kule nguqulo intsha, sinayo Iimpawu ezintsha ezingama-30 kuhlobo lweFusion 10, ekufuneka zongezwe ngaphezulu ezingama-20 kuhlobo lwePro. Ngokukhawuleza xa sivula isicelo, sifumana utshintsho lothungelwano. I iithebhu zifikile kwiFusion kwaye ngoku sinokubona konke okwenziweyo okukhoyo ngonqakrazo lweqhosha.
Kwelinye icala, abaphuhlisi bathathe ithuba kuzo zonke iindaba kwi-MacOS High Sierra. Yimeko leyo I-Metal 2, evumela ukukhula kakuhle kwemizobo, ngaphandle kokusebenzisa gwenxa okanye ukusetyenziswa kwebhetri. Siza kubona kwakhona ukuphuculwa kwemidlalo kunye nesoftware enzima eqhutywa kwiWindows. Kwelinye icala, ukudityaniswa kwale nguqulo kunye ne Ibha yeBar, Iququzelela unxibelelwano kunye nokusetyenziswa.
Uninzi lwalunamathandabuzo malunga nokuhambelana xa kuqhuba windows kumatshini obonakalayo, kunye nenkqubo yolawulo entsha Iifayile ze-APFS. Singatsho ukuba ngeli xesha akukho zikhalazo kubasebenzisi abaneengxaki ezinokubakho.
Ngaphandle kokuba ungumphuhlisi okanye uqhuba umsebenzi othile, uguqulelo olusisiseko lwanele ngaphezu kwemihla ngemihla. Singazuza I-Fusion 10 ukusuka kwi- € 88,95 okanye ukuphucula ukuba sinenguqulo yangaphambili, ye- € 54,95. Kwelinye icala, inguqulelo yePro inexabiso ngexabiso le- € 176,95 kunye nohlaziyo kwi- € 131,95
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Fusion 10 kunye ne-Fusion 10 Pro ngoku ziyafumaneka kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
Naluphi na uphuculo lwamkelekile kwaye luyahambelana. Kodwa ndibona amaxabiso e-APP ebiza kakhulu, kodwa yile nto inayo, kuba ulondolozo abalwenzayo kunye nohlaziyo alwenziwa lodwa, kukho iqela elikhulu ngasemva kwalo.
I-Apple ikhupha iMacOS ePhakamileyo yeSierra 1 beta 10.13.1
I-Apple TV ibuyile kwiAmazon